Yakavanzika Mutemo - GoViral
Iyi Yakavanzika Policy inotonga nenzira iyo GoViral.ai inounganidza, kushandisa, kuchengetedza uye kuburitsa ruzivo rwakatorwa kubva kune vashandisi (yega yega, "Mushandisi") yewebsite ye https://goviral.ai ("Saiti"). Iyi yekuvanzika mutemo inoshanda kune iyo Saiti uye zvese zvigadzirwa uye masevhisi anopiwa neGoViral.
Tinogona kuunganidza ruzivo rwekuzvizivisa kubva kuneVashandisi munzira dzakasiyana siyana, kusanganisira, asi kwete kune, apo Vashandisi vanoshanyira saiti yedu, kunyoresa pane saiti, kuisa odha, kunyorera kunhau, kuzadza fomu, uye zvine hukama ne zvimwe zviitiko, masevhisi, maficha kana zviwanikwa zvatinoita kuti zviwanikwe paSiti yedu. Vashandisi vanogona kubvunzwa, sezvakakodzera, zita, email kero, tsamba yekutumira. Vashandisi vanogona, zvakadaro, vanoshanyira Saiti yedu vasingazivikanwe. Tichaunganidza ruzivo rwekuzvizivisa kubva kune Vashandisi chete kana vakazvipira kuendesa ruzivo rwakadai kwatiri. Vashandisi vanogona kugara vachiramba kupa ruzivo rwekuzvizivisa, kunze kwekuti rungavatadzisa kuita zvimwe zviitiko zvine chekuita neSiti.
Tinogona unganidza non-oga kuzivikanwa ruzivo pamusoro Users pose ivo anosangana yedu Site. Non-munhu kuzivikanwa mashoko ringabatanidza Browser zita, mhando kombiyuta uye michina ruzivo pamusoro Users nzira riine Site edu, dzakadai uchishandisa maitiro uye Indaneti basa rinobatsirwa kushandiswa uye mamwe mashoko akafanana.
Site wedu anogona kushandisa "Cookies" kuwedzera User ruzivo. User rebuve mubrowser anoisa mabhisikiti zvavo zvakaoma ngarurege nokuda rekodhi anochengeta zvinangwa uye dzimwe nguva kuti chamber mashoko pamusoro pavo. User angasarudza kuisa kwavo padandemutande browser kuramba makeke, kana kuti pasvika imi kana Cookies vari kutumirwa. Kana ivo kudaro, cherechedza kuti zvimwe zvikamu Site arege kuitike.
GoViral inogona kuunganidza uye kushandisa Vashandisi ruzivo rwevanhu pazvinangwa zvinotevera:
-Kuvandudza basa revatengi: Ruzivo rwunopa runotibatsira kupindura kune ako mutengi webasa zvikumbiro uye rutsigiro rwunodiwa zvakanyanya.
-Kuvandudza yedu saiti: Tinogona kushandisa mhinduro yamunopa kuvandudza zvigadzirwa nemasevhisi edu.
-Kumhanya kukwidziridzwa, kukwikwidza, kuongororwa kana chimwe chikamu cheSayiti: Kuti utumire Vashandisi ruzivo rwavakabvuma kugamuchira pamusoro pemisoro yatinofunga kuti ichavafarira.
-Kutumira maemail epamhepo: Tinogona kushandisa email kero kutumira ruzivo rweMushandisi uye zvinyorwa zvine chekuda kwavo. Iyo inogona zvakare kushandiswa kupindura kubvunza kwavo, mibvunzo, uye / kana zvimwe zvikumbiro. Kana Mushandisi akasarudza kusarudza-kupinda mune yedu tsamba yekutumira, ivo vanogamuchira maemail ayo anogona kusanganisira kambani nhau, zvinyorwa, zvine chekuita nechigadzirwa kana ruzivo rwebasa, nezvimwewo Kana paine chero nguva Mushandisi angada kunyora kubva pakutambira maemail emangwana, isu tinosanganisira yakazara nyora zvirairo pazasi peemail imwe neimwe.
Tinobvumirana akakodzera mashoko muunganidzwa, okuchengetera uye kubudiswa miitiro nokuchengeteka matanho okuchengetedza pamusoro mvumo kuwana, shandurudzo, Kuziviswa kana kuparadzwa kwako zvemunhu, Username, pasiwedhi, kutengeserana ruzivo uye mashoko zvakachengetwa zvedu Site.
Hatitengese, tengesa, kana kubvarura Vashandisi ruzivo rwekuzivikanwa kune vamwe. Tinogona kugovera generic yakavhenganiswa ruzivo rwevanhu isina kubatana neruzivo rwekuziva nezvevashanyi uye vashandisi nevatinoshanda navo bhizinesi, vatinoshanda navo vatengi
GoViral ine hungwaru hwekuvandudza iyi yekuvanzika nguva chero nguva. Kana tadaro, isu tinodzokorora iyo yakagadziridzwa zuva pazasi peji rino. Tinokurudzira Vashandisi kugara vachiongorora peji ino kuti pave neshanduko kuti vagare vachiziva nezvedu kuti tiri kubatsira sei kuchengetedza ruzivo rwemunhu isu rwatinotora. Unobvuma uye unobvuma kuti ibasa rako kuongorora iyi yekuvanzika nguva nenguva uye nekuziva kugadziriswa.
GoViral Tsigiro: [email inodzivirirwa]
Gwaro iri rakapedzisira kuvandudzwa munaGunyana 24, 2020.
YouTube Vhidhiyo Yekushambadzira Mafambiro Anogona Kupisa Muna 2022
YouTube Shorts: Inopa Chero Chinhu Chakasiyana Kubva ku Instagram Reels uye TikTok?
Iyo Yakanakisa Yemukati Pfungwa dzeYouTube Yemitambo Channel Kukura